Rose of Sharon: February 2011
ဒီလိုနေ့တွေတိုင်းမှာတစ်ယောက်သူကို အမြဲသတိရတယ်…. ခင်ပွန်းသည်က ကိုယ့်အနားရှိနေပေမဲ့ ကိုယ်သတိရမိတာ သူ့ကိုသာ… စိတ်ထဲကလဲ ခင်ပွန်းသည်ကို တောင်းပန်နေမိတယ်… တစ်နှစ်မှာတစ်ရက်သာ ထိုတစ်ယောက်သောသူအား သတိရမိခြင်းကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့….
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်တုန်းက ထိုတစ်ယောက်သောသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတယ်… ကိုယ့်အပေါ် အရာရာသိတတ်နားလည်လွန်းသူ… ကိုယ်မျက်နှာပျက်ရင်မနေတတ်သူ… ကိုယ်ငိုရင် သူပါမျက်ရည်တွေဝိုင်းလာတတ်သူ… ကိုယ်နဲ့ခွဲရတော့မဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်မသိအောင်ကြိတ်ငိုတတ်ခဲ့သူ… ကိုယ့်မျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း ချစ်လိုက်တာလို့ပြောတတ်သူ… အဝေးရောက်နေချိန်တွေမှာ မိဘမောင်နှမတွေဆီတောင် စာမရေးတတ်သူက ကိုယ့်ဆီစာတွေမှန်မှန်ရေးတတ်သူ… ရည်းစားများခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်ကိုမယုံကြည်ဖို့ မနာလိုသူတွေ သွေးထိုးကြပေမဲ့ ကိုယ့်အပေါ်မေတ္တာမပျက် သံသယမဖက်ဘဲ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခဲ့သူ….သူများတွေအားကျလောက်အောင်ကိုယ့်ကိုသိပ်ချစ်ခဲ့တဲ့သူ… အခုတော့ သူကိုယ့်အနားမှာမရှိတော့ဘူး…
အခုကိုယ့်အနားမှာရှိနေသူကကိုယ့်ကိုဒီလိုချစ်ခဲ့သူဆိုတာ ကိုယ်တစ်ယောက်ဘဲသိနေနိုင်တော့တယ်… ခလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေး…စားဝတ်နေရေး…ပညာရေး…အနာဂတ်အရေးတွေ ကကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လုံး အတွေးထဲမှာ နေရာယူစိုးမိုးလာတဲ့အခါ ဟိုးအရင်ကလို ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် ကဗျာမဆန်နိုင်ကြတော့ဘူး… တခြားစုံတွဲတွေရော ကိုယ်တို့လိုဘဲလားလို့တွေးမိတယ်… ခလေးမရှိကြသေးတဲ့ စုံတွဲတွေတော့ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာ ကဗျာဆန်နိုင်ကြဦးမယ်ထင်ရဲ့… တစ်ချို့စုံတွဲတွေတော့ အဲလိုနေ့မျိုးမှာ ခလေးတွေကို ဆွေမျိုးသို့မဟုတ် အိမ်ဖော်နဲ့ထားခဲ့ပြီး အပြင်ထွက်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်… ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်လုံးက ခလေးတွေကို ကျောင်းသွားနေချိန်ကလွဲလို့ ကိုယ်တို့မျက်စိအောက်မှာဘဲ အမြဲရှိနေစေချင်တော့ အဲလိုတွေလဲ မလုပ်ဖြစ်ဘဲ အိမ်မှာဘဲ မိသားစု တခုခုလုပ်ဖြစ်ကြတယ်…
ဒီလိုနေ့ရောက်တိုင်း ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုးအရင် ချစ်သူဘဝကိုတော့ ပြန်လည်တမ်းတမိတယ်… သူရော သူ့ကိုအရိပ်ကြည့်ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့… သူ့ရဲ့ကျွတ်သွားတဲ့ မျက်တောင်လေးကိုတောင် ကောက်ပြီး တယုတယသိမ်းထားခဲ့ဘူးတဲ့… သူ့ပုခုံးကိုမှီပြီး ချွဲနွဲ့စွာသီချင်းတွေဆိုပြတတ်တဲ့… သူချစ်တာထက်သူ့ကိုပိုချစ်တာလို့ အမြဲပြောတတ်တဲ့ သူ့ချစ်သူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကို ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ သတိရနေမှာလား….
Posted by rose of sharon at 5:49 AM 12 comments: Links to this post
တခါတလေတော့လည်း စိတ်ရှိလက်ရှိပြောချင်တာတွေ ပြောလိုက်ချင်သား… ဒါပေမဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေတဲ့သူမှာ ထိန်းချူပ်ရတာတွေက အများသား… ဟစ်တိုင်တခုလောက် သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထားလိုက်ချင်ရဲ့… ဘယ်သူမှ သိဖို့ ကြားဖို့မလိုပါဘူး… ရင်ထဲမှာပေါ့ပါးသွားရုံလေးပါ… ပြောချင်တာမပြောရ လုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်ရတဲ့အခါ ဘဝရဲ့ ရပ်တည်မှုက အဓိပ္ပါယ်မဲ့လွန်းနေသလား…. ဟန်မဆောင်တတ်လို့ စိတ်ထဲရှိတာတွေဘဲ ပြောဘို့ အားယူမိတုန်း ကိုယ်တစ်ယောက်သာမြင်နိုင်တဲ့ လက်ဖဝါးတစ်ခုက လက်ခါပြတဲ့ အခါ ကိုယ်ဆွံ့အသွားရပြန်တယ်… လိမ်ညာမပြောချင်သူမို့ လိမ်ပြောကြသူ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကိုယ်ဟာ တေမိ… မရှိတာတွေ အရှိလုပ် မဟုတ်တာတွေ အဟုတ်လုပ် တစ်ယောက်လိမ်တာကို တလှည့်စီယုံကြဘို့ သစ္စာဆိုထားကြသူတွေ အလည်မှာ ကိုယ်ဟာ သိုးမည်းတစ်ကောင်… အမှန်တရားကို မှောက်သွန်ချ အမှားတွေကို ပန်ဆင် ပြီး တလှည့်စီ မြှောက်ပင့်နေကြတဲ့ အခါ အဝေးက ဟစ်တိုင်တစ်ခုကို တောင့်တမိခဲ့… နည်းပညာတွေတိုးတက်လာသလို အလိမ်အညာလက်မှတ်တုတွေ ပေါများလာတဲ့အခါ လက်မှတ်စစ်ကိုင်ဆောင်သူကို သံသယမျက်လုံးများနဲ့ ပစ်ခတ်ကြ…အဲဒီအခါ အကြိမ်ကြိမ်တမ်းတမိတဲ့ ဟစ်တိုင်တစ်ခုကို စိတ်ကူးထဲမြင်ယောင်ကြည့်မိ… ဟစ်တိုင်ဟာ အဝေးတစ်နေရာက လူသူကင်းဝေးတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်…. လူစည်ကားရာမှာ ဟစ်တိုင်ရှိနေရင် အဲဒီဟစ်တိုင်ဟာ အမှန်တရားတွေ ရင်ဖွင့်ရာနေရာ တစ်ခု မဖြစ်နိုင်ဘူး… သူများကြားအောင် လိမ်ညာအော်ဟစ်ရင်း အမည်းရောင်မုသားတွေနဲ့ ပေရေနေတဲ့ ဟစ်တိုင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်… ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့နေရာ ဘယ်သူမှမကြားနိုင်တဲ့နေရာ… ဘာမှမတုန့်ပြန်မဲ့ ဟစ်တိုင်တစ်ခု ရင်ထဲပေါ့ပါးသွားရုံလေး နှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့ ဟစ်တိုင်တစ်ခု ရှာနေဆဲ ရှာနေရင်း….
Posted by rose of sharon at 11:26 AM 16 comments: Links to this post